IPontoon House kukubalekela kuzolile ukuya eNtshona yeIreland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPaddy & Emer
IPontoon House yinjongo eyakhiweyo, indawo yokuzityisa efumaneka ePontoon, kwisithili saseMayo kwintshona yeIreland. Yindlu entle yelitye lendlu yamatye, ekwindawo eyihektare enye ejongene neLough Cullin kwaye ibekwe phakathi kweNephin kunye neeNtaba zeOx ngaphandle nje kwePontoon, kwisithili saseMayo. Le njongo yokuzenzela indawo yokuhlala ibonelela bonke ubunewunewu bale mihla kunye nentuthuzelo kunye nesimbo kwaye sisiseko esifanelekileyo sokuhlola iNtshona yeIreland.
Indawo ekuyo-indawo yokubaluleka okukhethekileyo okubukekayo-ukuzola okumsulwa-akukho siphithiphithi.
Isiseko esihle sokhenketho kwiNtshona yeIreland.
Zijonge ngokwakho nge-Master lock key.
Ngefowuni / i-imeyile kunye nayiphi na imibuzo kwaye ukuba kukho nayiphi na ingxaki u-Adrian kwidolophana ngokukhawuleza uyakwazi ukuyilungisa.
Ubuhle obukhulu bendalo-ifestile nganye inomfanekiso weposikhadi ukusuka kuyo.
Hayi ufuna isithuthi sokujonga indawo.
…thatha uhambo ngesikhephe….
Ukuya kwiSiqithi saseClare kwi "Pirate Queen" ebizwa ngegama likakumkanikazi wamapirate wenkulungwane ye-16 uGrace O'Malley (Granuaile).
Ukuhamba ngenqanawa ukusuka eRoonagh Quay (eNtshona yeLouisburgh) ukuya eClare Island kuthatha nje imizuzu eli-15. Uhambo lunika ixesha elaneleyo lokujonga kunye nokufota unxweme olunomtsalane olubandakanya iAchill Island, udederhu lweeNtaba zeNephin, iziqithi zaseClew Bay, iCroagh Patrick (intaba engumhambi edumileyo yaseIreland) kunye neInishturk.
Qhagamshelana 098 23737 okanye i-imeyile clareislandferry@anu.ie
….loba iisalmon kunye netrout eLough Conn naseCullin nakuMlambo moy…
Sikufuphi neendonga zelizwe elidumileyo iLough Conn, iLough Cullin kunye noMlambo iMoy oquka awona manzi avuzayo e-salmon eIreland. I-Lough Conn ivelisa i-salmon ye-400-500 kunye ne-8000-10000 yetrout ngonyaka. Umlambo omangalisayo weMoy uvelise ngaphezu kwe-salmon ye-7000 kwintonga kwiminyaka ye-2001-2006. I-Moy inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuloba kubandakanywa impukane yamanzi aphezulu, i-spinning kunye ne-worming kunye nokuloba kuyafumaneka ukuze kuhambelane nazo zonke izinto ezithandayo kunye nohlahlo lwabiwo-mali. Unokuloba kwi-Moy unyaka wonke, kodwa ngoMeyi ukuya kuSeptemba lelona xesha lilungileyo lokwenza njalo.
Kukho uhambo oluninzi olunika umdla ekuhlaleni kuxhomekeke ekubeni ungathanda ukuya kude kangakanani. Nceda uqhagamshelane 094 9047545 okanye khangela iwebhu www.mayowalks.ie.
Nokuba ingaphakathi okanye ingaphandle sinayo yonke. ICastlebar kunye neBallina zinamachibi azo okuqubha kawonke wonke abonelela abantwana kunye nabantu abadala, kukho amaxesha athile kuphela okuqubha kawonke-wonke ngoko qhagamshelana neCastlebar, kule nombolo yomnxeba. 094 21357 okanye Ballina inombolo yomnxeba. 096 70506 phambi kokuba ucwangcise utyelelo lwakho. Ulwandle lwase-Enniscrone lukumgama oziikhilomitha ezili-15 kuphela kwaye kukwakho neflegi eluhlaza elunxwemeni eRoss, Killala (iikhilomitha ezili-17). Ikwabekwe e-Enniscrone yiWaterpoint, iziko lokuzonwabisa langaphakathi. Kule ndawo kukho iindawo ezintle ezinesanti ezijikeleze iLough Cullin.
Kunxweme lweLough Cullin, landela indlela yelali ukuya esangweni kwaye ungahamba emhlabeni (indlela elungileyo kwaye akukho nkunzi) kwaye ufumane iitafile ezininzi zendalo zamatye.
Khuphuka eCroagh Patrick
Biyela iGreenway ukusuka eWestport ukuya eMulranny kwaye ufumane isidlo sasemini kwihotele yaseMulranny.
Ndwendwela iMyuziyam yeSizwe eTurlough kwaye uthathe uhambo lweGreenway ukuya eCastlebar.
Konwabele ukuhambahamba kulwandle lwase-Enniscrone
Ndwendwela iWestport House kunye neWestport.
Ndwendwela eLouisburgh, eLennane, eClifden, eConnemara.
Kukho uluhlu lweendawo zegalufa ngaselunxwemeni nangaphakathi kubandakanywa iWestport, iMulraney, i-Enniscrone, iCarne Belmullet, iRosses Point, iCastlebar, kunye neBallina Golf Club.
Kutheni ungajongi indawo esisingqongileyo ngebhayisekile?, mhlawumbi uthathe ipikiniki kunye nawe kwisidlo sakho sasemini.
Iibhafu ze-Kilcullens ze-Seaweed njengoko igama libonisa ukuba ibhafu izele lukhula lwaselwandle. Ngamanzi olwandle kodwa ungakhathazeki ukuba bayawufudumeza kuqala. Iingcango zezi bhafu zolwandle zaqala ukuvulwa ngo-1912 ngoko yinxalenye enkulu yembali ye-Enniscrone. Zivulelekile unyaka wonke kwaye zibekwe kumganyana nje omfutshane e-Enniscrone, umnxeba. 096 36238.
ICastlebar Cineplex ikwidolophu kwaye inokhetho lokukhutshwa okutsha okuboniswa ngobusuku. Ungatsalela umnxeba ku-1520 927 010 xa ufuna ugcino.
….phonononga imbali yethu….
IMyuziyam yeSizwe yaseIreland-uBomi beLizwe yimeko eTurlough Park, eCastlebar. Imiboniso ibonisa ubomi babantu abaqhelekileyo ababehlala emaphandleni ase-Ireland kwixesha le-1850 - 1950. Ugxininiso lubekwe ekuqhubekeni kwendlela yokuphila, eyasekwa iminyaka engamakhulu amaninzi kwaye iqhube kakuhle kwi-20 yenkulungwane.
Ungandwendwela iZiko labatyeleli leFoxford Woolen Mills, inombolo yomnxeba. 094 9256756.
nokuba ungumqali okanye uchwephesha kukho iinketho zokusefa kumntu wonke. Unxweme olusentshona lubonelela nge-surf enkulu kuwo onke amanqanaba. Kukho izikolo ze-surf ezikufutshane ne-Achill kunye ne-Enniscrone, okanye kude ukuya eStrandhill.
I-Delphi Adventure Centre ibekwe ngaphaya kwe-Westport liziko lomsebenzi lilonke
usapho, ukubonelela ngolwandle, intaba kunye nehlathi. Bangaqhagamshelwa kwi
095 42208. Westport House ibekwe Westport kwaye lusuku olukhulu usapho fun, tel
hayi. 098 27766.
Ngaba uyathanda ukuluma ngelixa uphumile?
IHotele iHealys (094 8256443) kunye nePontoon Bridge Hotel (094 9256120) zikude nje ngeemayile ezi-1½ kwaye zibonelela ngokutya okugqwesileyo kwaye ziyathandeka kwisiselo esizolileyo nabahlali kwaye zibonelela ngokonwabisa ngeempelaveki.
ICafé Rua (094 9023376) ime kwiCastlebar. Le cafe icetyiswa kakhulu ifanelekile kwisidlo sasemini esilula kuhambo lwakho. Kufutshane nawe unokufumana iZiko lobuGcisa laseLinenhall kunye nentabalala yeevenkile zalapha ekhaya.
I-Ice House (096 23500) yindawo yokutyela yodidi oluphezulu ebekwe eBallina.
I-Foxford Woolen Mills (094 9256756) inikezela ngokhetho lokutya okwenziwe ekhaya okutsha, ukusuka kwikomityi yeti okanye yekofu ukuya kwishwamshwam elilula okanye isidlo esipheleleyo.
UGilroys (096 37222) ume kwilali esecaleni elunxwemeni yase-Enniscrone. Ivulwa ngobusuku kwaye iziva ikhululekile kuyo. Kukho indawo entle yokujonga ecaleni kwendlela ukuze ugcine amehlo akho exolile.
Indawo yokutyela yeTyuwa (094 9545400) eLisloughrey Ifakwe e-Cong ibonelela ngokutya okukumgangatho wehlabathi kwindawo eyodwa. Wonke umgangatho wokuqala wendlu yokuqala ubuyiselwe ngokwenyani kwaye ubonisa ingqokelela yeendawo ezisondeleleneyo ukuze ukonwabele ukutya okumnandi kunye newayini.
Intshona yeIreland inokuninzi onokuyinika kwaye ulapha kanye embindini wayo yonke. Ukusuka eCastlebar ukuya eBallina, eWesport nangaphezulu ukuya eGalway okanye eSligo kuninzi okufumanayo ungadinga ixesha elingakumbi.
Ke ukukunceda wenze isigqibo ngeyona nto ifanele ishedyuli yakho nazi iingcebiso ezimbalwa:
• Uhambo olufutshane oluya eFoxford kwisidlo sasemini kwiindawo zokusila ezilandelwa lukhenketho lokusila. Buya ngeCastlebar uyokuthenga. ICastlebar ibonelela ngeevenkile ezininzi ezitalatweni eziphezulu kunye nabakhenkethi basekhaya.
• Thatha indlela eya eSligo, khetha kwindlela eselunxwemeni okanye kwindlela enkulu. Amanye amaxesha amnandi efoto ecaleni kwendlela eselunxwemeni kodwa kunokuba nomoya. Bukela abadlali baselwandle njengoko udlula kwaye ume eStrandhill ngesidlo sasemini. Yiya eSligo ukuze ujonge iivenkile ezixakekileyo, iivenkile zokutyela kunye nemivalo.
• I-Ceide Fields e-Ballycastle zezona nkqubo zentsimi zindala zaziwayo ehlabathini - ngaphezu kwesiqingatha senkulungwane yeminyaka ubudala - kwaye baneziko labatyeleli apho - bonwabele!
• I-Croagh Patrick kulapho umgcini wengcwele wase-Ireland wazila ukutya iintsuku ezingama-40 ngo-441AD, kwaye kuthiwa wenza isenzo sakhe sokugxotha inyoka. Indawo entle yokuhamba.
• Isiqithi sase-Achill siyindawo entle kumda weNtshona Yurophu enembali kunye nemibono emangalisayo. U-Achill ulufanele utyelelo, kwaye qiniseka ukuba uya eKeel beach.
• Kwaye ukuba konke oko bekungonelanga, kukho intaphane yeelali ezinomtsalane onokundwendwela ukusuka kwindawo entle eWestport (qiniseka ukuba undwendwela iWestport House) ukuya kwidolophu enoxolo yaseCong (fowunela kwiAshford Castle).
• Inkonzo yeTeksi yalapha………qhakamshelana noLiam 086 2259381 lol
Umbuki zindwendwe ngu- Paddy & Emer
Myself & my wife Emer built/renovated these beautiful self catering homes for the purpose of family enjoyment. We ensure that your every request is dealt with promptly and to your satisfaction. Our business is based on Goodwill and thankfully our clients keep returning to Pontoon House & Maison Cruzy with their families. Cleanliness is our ethos and we strive to ensure a very welcoming house awaits you.
Myself & my wife Emer built/renovated these beautiful self catering homes for the purpose of family enjoyment. We ensure that your every request is dealt with promptly and to your…
Indlu yakhe yindlu yesi-5 ngasekunene kwindawo ephakamileyo njengoko ubuyela kwilali.
Inombolo yam yeselula ithi 00353874174848
Indlu yakhe yindlu yesi-5…